Njikere Ibu Ibu Ngwaahịa Instagram Gị? | Martech Zone
Aga m na-akpa na-ekweta na m na-adịghị etinye oge dị ukwuu n'ime Vine, Instagram na-ekere òkè oyiyi na mmadụ mgbasa ozi. Achọrọ m, mana ọ dị nnọọ mfe ịnye ọnụ site na ederede karịa ka ijide eserese, mee ụfọdụ imewe, ma kesaa ihe nwere nghọta, mana ọ na-enwetakwu anya. M ifufe na-ewere foto na vidiyo nke nkịta m Gambino kama… ndi n'eso m huru ndi ahu!
Enwere m olileanya ịgbanwe na afọ a. Achọrọ m ilekwasị anya na atụmatụ anyị ma hazie ha na ntanetị mgbasa ozi anyị niile ka mma. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-eji igwefoto m iji were foto nke ihe ngosipụtara nke post post m na-ekerịta, ejiri m n'aka na ọ nwere ike iru karịa selfie… ma ọ bụ doggie. Ọ dịkwa mkpa maka akara anyị na ọdịnaya anyị ji arụ ọrụ dị egwu. Atụmatụ ndị dị na infographic a ga-enyere aka!
Ndị na-azụ ahịa taa na-arụ ọrụ na nlezianya anya nke na mgbe ụfọdụ ọbụlagodi Facebook enweghị ike ijide. Nke a bụ ihe kpatara Instagram ji na-arịwanye elu na ewu ewu. Ihe ọtụtụ ndị nwere n’oge gara aga chere maka naanị saịtị ịkekọrịta foto, abụrụla nnukwu ngwa ahịa mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịmepụta ezigbo nsonaazụ akara maka akara gị. Issa Asad
Banyere infographic ahụ, Issa Asad na-enye akwụkwọ ọgụgụ zuru ezu Uru ozugbo na Instagram budata ugbu a n'efu.
Tags: ahia ahia onyonyoinstagramahịa nke instagramIssa Asadahịa ahịaWyzowl
Wepụ ihu & Center (@EXITFrontCenter)
Jenụwarị 21, 2015 na 2:50 PM
Daalụ, Douglas maka nnukwu infographic. Mụ onwe m ezigabeghị na saịtị ụlọ ọrụ anyị nke Instagram dị ka m kwesịrị na nke a kwesịrị inyere aka ịmalite m.